Tsy maintsy atao izao ny vaksinin'ny vaksiny ho an'ny orinasa anaty trano any San Francisco
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Tsy maintsy atao izao ny vaksinin'ny vaksiny ho an'ny orinasa anaty trano any San Francisco
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • culinary • Kolontsaina • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ben'ny tanànan'i San Francisco London Breed
San Francisco dia mitaky orinasa amin'ny sehatrasa mifandraika amin'ny avo lenta mba hahazo porofon'ny fanaovana vaksiny amin'ireo mpiaro azy sy ny mpiasa ho azy ireo hiditra ao anatin'ireny toerana ireny.
Ny fepetra ara-pahasalamana momba ny porofon'ny fanaovana vaksiny feno ho an'ireo mpiaro ny toerana ampahibemaso anatiny, ao anatin'izany ny bar, trano fisakafoanana, klioba ary gym dia manomboka amin'ny 20 aogositra.
Ny filaminana ara-pahasalamana dia natao hiarovana amin'ny fielezan'ny COVID-19, indrindra amin'ireo tsy voamarina.
Ny baikon'i San Francisco koa dia mamorona porofo vaovao momba ny fepetra takiana amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ireo hetsika lehibe ao amin'ny trano anatiny.
Ny ben'ny tanànan'i San Francisco dia namoaka filaminam-pahasalamana vaovao natao hiarovana amin'ny fielezan'ny COVID-19, indrindra amin'ireo tsy voamarina, ary mitazona ny fisokafan'ny orinasa ary manampy amin'ny fitazomana ny sekoly hisokatra hatrany.
Voaporofo fa ilaina izao ny vaksinin'ny vaksiny ho an'ny orinasa anaty trano any San Francisco
ben'ny tanàna Nanambara i London Breed androany fa San Francisco dia mitaky orinasa amin'ny sehatr'asa mifandraika amin'ny avo lenta mba hahazoana porofon'ny fanaovana vaksiny amin'ireo mpiaro azy sy ny mpiasa ao aminy mba hidirany ao anatin'ireny toerana ireny.
Ho fanampin'izany, ny filaminan'ny tanàna vaovao dia mamorona porofo vaovao takiana amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ny hetsika lehibe amin'ny toerana an-trano, mitaky ny mpanatrika izay 12 taona na mihoatra amin'ny hetsika misy olona 1,000 na mihoatra hanome porofo momba ny vaksiny.
"Fantatsika fa mba hiverenan'ny tanànantsika amin'ny areti-mandringana sy hivoatra dia mila mampiasa ny fomba tsara indrindra hiadiana amin'ny COVID-19 isika ary izany no vaksiny," hoy i Breed.
Talohan'izay, ny fitsipiky ny fanjakana sy ny eo an-toerana dia mitaky porofon'ny fanaovana vaksiny na fanandramana hanatrehana hetsika mega-anaty miaraka amin'ny olona 5,000 na mihoatra.
Ny lalàna vaovao momba ny fahasalamana vaovao ho an'ny porofon'ny fanaovana vaksiny feno ho an'ireo mpiaro ny toerana ampahibemaso anatiny, ao anatin'izany ny bar, trano fisakafoanana, klioba ary gym dia manomboka amin'ny 20 aogositra.
Mba hitehirizana ny asa raha manome fotoana ho an'ny fanarahan-dalàna, ny porofon'ny fitakiana vaksiny ho an'ny mpiasa dia manan-kery amin'ny 13 Oktobra ho an'ny mpiasa, araka ny fanambarana.
Ny fepetra takiana amin'ny fanaovana vaksiny ho an'ny hetsika anaty trano, na ho an'ny tsy miankina na ho an'ny besinimaro, izay misy olona 1,000 20 na mihoatra dia manankery amin'ny XNUMX aogositra.
Manakaiky ny robots 1 tapitrisa izao any amin'ny orinasa Shina
WTM London dia namoaka an'i Saodita ho mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny 2021
Nafindra toerana noho ny fandrahonana baomba ny US Capitol complex
India dia manao fitsapana COVID-19, voatery ny quarantine ho ...
Mialà sasatra ny Admin hoy:
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 35